Andriantompokoindrindra - Wikipedia
Andriantompokoindrindra dia zanaka lahimatoan' ny mpanjaka Ralambo (1575-1610) tamin' ny andriambavy Ratompokoamandrainy Rabehavina izay zanaky ny mpanjaka Andriamamilazabe.
1 Andriantompokoindrindra: zanakalahin-dRalambo
1.2 Momba ny fandovana fanjakana
1.2.1 Tsy nanjaka?
1.2.2 Nanjaka ihany?
2 Ny Andriantompokoindrindra
2.1 Taranak' Andriantompokoindrindra
2.4 Taranaka jiosy sa arabo?
Andriantompokoindrindra: zanakalahin-dRalambo[hanova | hanova ny fango]
Tao Ambohimanjaka-Ambohimalaza ary no teraka Andriantompokoindrindra tamin' ny faran'ny taonjato faha-16. Marihina fa ny mpanjaka Ralambo rainy dia nafenina ao antampon'Ambohidrabiby ary ny Andriambavy Rabehavina reniny dia nafenina ao Ambohimalazabe.
Fony fahazazany dia notezain-drainy teo aminy teo Ambohidrabiby i Andriantompokoindrindra ary nomeny ny fitaizana rehetra momba ny handimbiasany azy amin' ny fanjakana any aoriana.Raha vao nanomboka lehibehibe kosa Andriatompokoindrindra dia napetrakin'ny rainy tamin' ny atsinanana amin'ny fanjakany dia tao Ambohimalazabe izany, niaraka tamin' ireo andriana sy ny mpanolotsaina roambinifolo ary vahoaka sy mpanompo maro.
Maro ireo zanaka lahin'ny mpanjaka Ralambo saingy navahany tamin'ireny i Andriantompokoindrindra sy Andrianjaka satria izy roalahy ireto ihany no mahazo manjaka fa ireo zanaky ny mpanjaka Ralambo sisa dia tsy mahazo manjaka. Arak' izany, amin'ny mahazo manjaka azy roalahy dia Zanakandriana no firazanan' Andriantompokoindrindra sy Andrianjaka. Ireo zanaka naterak' i Ralambo hafa dia nosokajiany ho Zanadralambo ny firazanany. Andrianjaka sy ny tarànany dia afaka nanjaka raha toa ka nanambady mivantana tamin' ny foko Andriantompokoindrindra.
Momba ny fandovana fanjakana[hanova | hanova ny fango]
Manaporofo io firazanana Zanakandriana an' Andriantompokoindrindra io, ny lovantsofina dia mitàna fa nanaovan-dRalambo fitsapana Andriantompokoindrindra sy Andrianjaka, ny amin'izay handimby azy. Nody nanao narary hono Ralambo ary mody nanao hoe tamy hanafika azy ny fahavalo. Ireo zanak'i Ralambo hafa rehetra anefa dia tsy mba nanaovana io fitsapana io.
Misy nilaza moa fa Andriantompokoindrindra dia mbola niezaka nanao fanorona aloha vao hamonjy ny haikan-drainy, ka hoy izy mantsy ny irak' Andriana: "izaho mbola hamono ny telo noho ny dimy" satria fantany hono fa hevi-petsin-drainy izany. Ka noho io valinteny io dia i Andrianjaka izay tsy nahalany vary sy tsy naharay lamba fa avy hatrany dia tonga teo Ambohidrabiby no nofidian-dRalambo handimby azy.
Nanjaka ihany?[hanova | hanova ny fango]
Misy kosa lovantsofina milaza fa tena nanjaka nandimby an-dRalambo mihitsy i Andriantompokoindrindra fa tato aoriana dia nomeny an' Andrianjaka zandriny ny fanjakana nohon' ny fitiavany an' io zandriny io sy rehefa nanao fifanarahana izy roalahy. a colline d'Ambohimalaza. Teo amin' ny tampon' ny havoana Ambohimalaza no nisy ny lapany.
Toy izany koa, Andriantompokoindrindra dia sarotiny tamin' ny fiandrianana ka andriana terak' Andriamamilazabe raibeny ihany no nekeny ho lehiben' ny mpanolotsainy miisy 12 teo Ambohimalaza. Ary izany lehiben' ny mpanolontsainy izany dia notsofin' Andriantompokoindrindra rano hiakandrefana hanitatra ny fanjakana koa lasa andriamanjaka razan' andriana amin' ny faritra Vonizongo iny.
Ny Andriantompokoindrindra[hanova | hanova ny fango]
Niteraka telo lahy Andriantompokoindrindra, ka ny zanany lahimatoa atao hoe Ratompoinandriana sy ny zanany faharoa Andriandambo ary ny taranany dia napetrany eo avarabohitra, fa ny zanany faralahy Andriamahatsiravina sy ny taranany kosa dia namponeniny eo atsimombohitra.
Ny Andriantompokoindrindra dia iray amin' ireo anaram-pirazanan' andriana merina. Ireo taranak' Andriantompokoindrindra tokoa mantsy dia nosokajian'-dRalambo ho "Andriantompokoindrindra" ny firazanany. Ary amin' Andriantompokoindrindra vavy no hakana ny vadiben'ny mpanjaka nanomboka tamin' Andrianjaka. Ny taranak' Andrianjaka dia tsy mahazo manjaka raha tsy avy amin' izay vadibe avy amin' ny foko Andriantompokoindrindra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriantompokoindrindra&oldid=1009530"
Voaova farany tamin'ny 13 Martsa 2021 amin'ny 17:27 ity pejy ity.